Amathiphu okuthi Ungazibhala Kanjani Izihloko Zokuthunyelwe Okumangazayo Nezihloko
Izihloko zezindaba, izihloko zeposi, izihloko, izihloko… noma yini ofuna ukuyibiza ngayo, yizona zinto ezibaluleke kakhulu kukho konke okuqukethwe okuletha. Kubaluleke kangakanani? Ngokwale Quographicprout infographic, ngenkathi Abantu abangama-80% bafunda isihloko esikhulu, kuphela U-20% wezithameli uyachofoza empeleni. Omaki besihloko babalulekile ku ukusebenzisa ngokugcwele injini futhi izihloko zezindaba zibalulekile ekutholeni okuqukethwe kwakho kwabelwane ngayo kwezokuxhumana.
Manje njengoba wazi ukuthi izihloko zezindaba zibalulekile, mhlawumbe uyazibuza ukuthi yini eyenza ibe yinhle nokuthi uyibhala kanjani, akunjalo? Yebo, namuhla usuku lwakho lwenhlanhla ngoba iQuicksprout isungule i- infographic ezokufundisa lokho nje.
Ukusetshenziswa kwezichasiso, ukunganaki, izibalo nefomula ephelele ye- Inombolo noma i-Trigger Word + Adjective + Igama elingukhiye + Isithembiso lilingana nesihloko esiphelele. UNeil ukhuluma ngezihloko ezimfishane futhi ezimnandi ngoba abantu bavame ukuskena kulezi zinsuku.
Ngenkathi ngihlala ngisazisa isihloko esifushane, sibonile amasayithi amaningi athole amazinga okuphendula amahle ngezihloko ezinde, ezinesenzo esixhuma nomfundi. Bengingeke ngesabe ukuhlola kokubili okufushane nokude. Ungahle ufune ukulungisa nje ithegi yesihloko kulezo zihloko ukuze izinjini zokusesha zinganqamuli isihloko osisebenzele kanzima ukuthuthukisa.
Bhekisisa izeluleko zokugcina… izihloko zezindaba zivame ukwehluleka ngoba azifani ne-athikili ebhaliwe, azicacisiwe ngokwanele, futhi izihloko ziyindida. Udinga usizo olwengeziwe futhi ufuna ukuzijabulisa? Ungakhohlwa i- Okuqukethwe Idea Generator kusuka Portent lokho kuphakamisa izingwegwe ezithile zezihloko zakho, kufaka phakathi izihloko zezindaba ezithola ukunakwa ngamasu afana ne-ego, ukuhlasela, insiza, izindaba, ngokuphambene, namahlaya.
Tags: ukuhlaselaI-Baker Marketingi-generator yombono wokuqukethweNgomusaokuphambeneikhophiEchoOsomabhizinisi-uhamboinkampani esheshayoizihlokoukubhala izihloko zezindabaukubhala kanjani izihlokoAmahlayaukwandisa izinga lokuchofozakhulisa i-SERP CTRukwakhekaI-MarketingLandmozi-neil patelIzindabasematheni epheleleathwaleIsikhundlaquicksproutImithomboIsikhathi sokuqalaamathiphu ezihloko zezindabaamathiphu ezihlokoizihloko
Usesho olukhokhelwayo: Izinyathelo eziyi-10 zokuwina ukuguqulwa kokukhokha ngokuchofoza ngakunye
Aug 25, 2014 ku-10: 07 AM
Okukhazimulayo! Sidinga ama-listicles abizwa kakhulu kuwebhu.